Huawei Watch Fit ongororo: Yakachipa, yakareruka, yakatetepa
The Huawei Tarisa Fit zvinoita kunge zvaungawana kana iwe ukakanda Huawei Band 4 Pro uye a Huawei Tarisa GT 2 a Apple Watch blender. Zviri pachena kuti kupfeka-kumberi kupfeka kupfuura yechinyakare kusimba tracker kana yakajairwa smartwatch, asi ichine mapaketi akaringana kuti akwane mumutsetse we "Huawei Watch" kwete mhuri ye "Huawei Band".
Ndanga ndakapfeka Huawei Watch Fit padhuze neiyo itsva "yakajairwa" smartwatch kubva kuHuawei, iyo Tarisa GT 2 Pro. Ruzivo rwepiri-runopfeka rwakapa kumwe kujekesa kunonakidza kwatinosvetukira mune zvimwe muongororo yedu yakazara yeHuawei Watch Fit pazasi. Mupambi: kunze kwekunge uchinyatsoda kuchaja isina waya kana titanium, girazi resafire, uye zvedongo pane ruoko rwako, iyo Huawei Watch Fit ichashanda zvakanyanya zvekutevera kwako kwekusimbisa muviri zvinongoda mazana maviri emadhora mashoma.
Huawei Tarisa Fit ongorora manotsi: Ini ndaipfeka iyo Huawei Watch Fit kwevhiki, paired neHuawei P40 Pro. Munguva yese yeHuawei Watch Fit yekuongorora nguva, yanga ichimhanya software vhezheni 1.0.0.52 neHuawei Hutano vhezheni 10.1.2.515. Iyo Huawei Watch Fit yekuongorora unit yakapihwa kune Android Authority naHuawei.
Huawei Tarisa Fit dhizaini
Credit: Kris Carlon / Android Chiremera
Ehe, iyo Huawei Watch Fit inoratidzika senge yakatambanudzwa, yakatetepa Apple Watch. Zvinosuruvarisa, izvi zvese-zvakare-zvakajairika dhizaini sarudzo pamitengo yakachipa yeanosakara masitepisi uko kuzivikanwa kunorira kwakasarudzika. Ndingadai ndaitarisira kuti Huawei yaizopfuura Apple-kutevedzera neiyi poindi munhoroondo yekambani yakadzvanywa asi ndizvo zvazviri, saka ngatingozvicherechedze uye tienderere mberi.
Kukwezva kuderera kweHuawei Watch Fit hakuna kurasika pandiri.
IHuawei Watch Fit ichakurumidza kukumbira kune avo vanowanzo farira zvinopa kupfeka zvaHuawei asi vasiri mukuwanda kwavo. Ini ndiri wekuda wechunky wachi pachezvangu, asi iko kuderera kukwidza kweHuawei Watch Fit haina kurasika pandiri. Chinhu chimwe chandakaona ipapo ndechekuti iyo Watch Fit haibatwe pa t-shirts senge angu mamwe smartwatches nekuti hapana mabhii mahombe kudivi.
Read more: Iwo akanyanya akasimba mateki
Iwe uchatsvaga bhatani bhatani kurudyi kurudyi, uye chivakwa chemagineti pogo pini yakabatanidzwa mu USB kuchaja tambo, saka chenjera kuti usarase kana kuiputsa kana iwe wafunga kutenga iyo Huawei Watch Fit. Iyo inosangana kune rimwe divi repurasitiki kumashure kweWatch Fit, padyo padyo neiyo moyo-rate sensor. Kana iwe uchishamisika, hongu, unogona kubhadharisa yako Wakatarisa Fit paunenge uchipfeka uye uchiri kuteedzera kurova kwemoyo wako, tora chiyero cheSpO2, kana kuongorora kushushikana kwako.
Pese paongororo iyi unenge uchiona izvo zvandinoona iro rakanakisa ruvara rweboka, iro rinobata maziso reCantaloupe Orange rakapetwa neiyo rose yegoridhe chassis. Iyo yekutarisa Fit inouyawo mushanduro ine Sakura Pink tambo (yakasimuka muviri wegoridhe), Graphite Nhema bhendi (mutema muviri), uye Mint Green wachi tambo (muviri wesirivheri). Iyo yeHuawei Watch Fit chassis inogadzirwa neye polymer zvinhu zvine matte kutaridzika.
Iyo yakapusa silicone tambo inogona kubhurwa nekubaya nzwara mune kagero kadiki kumashure kuti ubvise plug iyo inokiya tambo munzvimbo. Kunze kwekunge iwe uchida kutenga imwe yepamutemo tambo iwe haukwanise kurasikirwa neiyo diki yekuvhara plug nekuti haugone kungokanda imwe yakajairwa tambo paWatch Fit. Achiri mazuva ekutanga, asi iyi epurasitiki yekukiya mashandiro haandizadze nekuvimba.
Iyo yekutarisa Fit yakajeka mwenje, ingori 34 magiramu (21 gramu pasina tambo).
Iyo-inogara-yakadaro-yakapetwa zvishoma 1.64-inch OLED skrini inoita basa rakanaka rekukwirisa mune rese rakafanana ruzivo idenderedzwa smartwatch inoita, asi inonzwa kunge yakamanikana zvishoma dzimwe nguva. Izvi zvinonyanya kuoneka pazviratidziro zvinoratidzira kurova kwemoyo kana nhanho dzekunetseka. Unozvijairira mushure mechinguva uye musiyano chaiwo ndewekuti font inogona dzimwe nguva kuve diki zvakanyanya pane pane akakura mawatch uye hauna nzvimbo yakatambanuka yekuratidza mairafu.
Iyo yeWatch Fit inoratidza inopa 456 x 280-pixel resolution (326ppi). Unotenderedza gumi nemaviri zviso zvakatakurwa zviso zvekutarisa zvaunosarudza kubva, zvimwe zvacho zvinogoneka, uye unogona kurodha pasi zvimwe kuburikidza neiyo Huawei Hutano app. Kune zvitanhatu zvinogara zviripo-pazviso zvekutarisa zvinowanikwa kunze kwebhokisi asi kushandisa izvi kungangoita hafu hafu yehupenyu hwebhatiri. Nezvinangwa zvekuyedza hupenyu hwebhatiri kune ino ongororo, ini handina kugonesa iyo inogara-iri kuratidzwa.
Nepo kupindika kwechiratidziro kwakaita kuti swipe mitezo isanyanya "kubata" pane kune zvimwe zvinopfeka zvandakashandisa nemipendero yakapinza, kubviswa kwechiedza kwakatenderedza mukombero wechidzitiro kwaive kurwadziwa. Ini handina kucherekedza kupenya kuri kunyanya kuwanda kwenyaya kazhinji uye uye iyo skrini yaive nemavara akanaka epoppy uye akadzika matema. Kupenya kwekunze kwaigamuchirwa zvakakwana kana zvisina kunyanya kuzivikanwa.
Onawo: Iwo akanakisa smartwatches izvozvi
Lite OS uye 10-zuva bhatiri hupenyu
IHuawei Watch Fit inomhanya Lite OS, imwechete inopfeka sisitimu yekushandisa iwe yaunowana pane mamwe madhivha mumhuri yeHuawei Watch. Iyo Lite OS UI yakagadzirwazve zvishoma kuti ikwane iyo rectangular skrini uye inotaridzika zvakanaka. Ini ndinoifarira kana ichienzaniswa neUI inowanikwa pane yakanyanya kumanikidza Huawei Band zvishandiso asi sezvataurwa pamusoro, zvakati wandei kupfuura Lite OS pamahwindo makuru eHuawei.
Kupesana nezvandakatanga kufunga, iyo Watch Fit inofambiswa neiyo DK3.5 + ST chipset, kwete iyo Kirin A1. Ini handina kujairika neiyi processor uye ndasvika kuHuawei kuti ndiwane rumwe ruzivo. Ndichiri kufunga kuti iri chipset yakachipa pane iyo A1 ichitarisa mutengo weWatch Fit, ini ndakazoiwana ichinyorova uye ichiteerera kupfuura iyo Huawei Watch GT 2 Pro (iyo inoshandisa Kirin A1). Kana jankiness yakakuisa iwe kure nedzimwe smartwatch dzeHuawei, zvinoita kunge isiri nyaya pano.
IHuawei Watch Fit inokutorera mazuva gumi ehupenyu hwebhatiri.
Huawei anovimbisa mazuva gumi ehupenyu hwebhatiri kubva ku10mAh bhatiri muWatch Fit. Ndakaibhadharisa zvizere pandakatanga kuiwana svondo rapfuura, izvo zvinoshamisa kuti zvakatora zvishoma kweawa, uye ndiri pa180% ndichinyora ongororo iyi. Izvo zvinofanirwa kubuda kunze kune izere mazuva gumi kana zvakadaro ebhatiri. Nekufananidza, iyo GT 15 Pro ini yandakanga ndakapfekawo panguva imwechete yaive pa10%, munzira yekukomberedza 2 kana mazuva gumi pane mazuva akavimbiswa gumi nemana.
Ndeapi software akafanana paHuawei Watch Fit?
Iyo Lite OS software ruzivo paWatch Fit ichave yakafanana chaizvo kune chero munhu akamboshandisa Huawei Tarisa pamberi. Kusvetuka nepakati pezvikwiriso zvinoratidzira kunoratidza kurovera kwemoyo, nhanho dzemamiriro ekunze, mamiriro ekunze, kutamba kwemimhanzi, uye dhibhodhi yechiitiko.
Kusiyana neWatch GT 2 Pro, iwe unogona chete kudzora mimhanzi inoridza pafoni yako, kwete kuiendesa kuWatch Fit. Tichifunga zvese zvishandiso zvine 4GB yekuchengetera, ndiri kufunga kuti iyi sarudzo haisi kuwanikwa paWatch Fit yezvikonzero zvehupenyu hwebhatiri. Kana kuti zvimwe chipset nyowani inowanisa iyo Watch Fit haigone kubata Bluetooth headphone kubatana. Kana pamwe nekuda kwekuti hapana mutauri paWatch Fit.
Iyo imwechete inopfeka software yawakajaira kubva kuHuawei Watches, yakashandiswazve kune yakatetepa kuratidza.
Icho chiitiko chedashboard chaungaona mumufananidzo uri pamusoro unovhara nhanho dzakafamba, maminetsi echiitiko chakateedzerwa, uye maawa ezuva nezuva anoshanda mune yakapfava yekufambira-mita mita. Zvimwe zviso zvekutarisa zvinogona kukwenya boka reruzivo urwu pachiratidziri chikuru kana chiri chinhu chako chikuru. Rumwe ruzivo rwechiitiko ruzivo runogona kuwanikwa muHuawei Hutano iyo yatinozofukidza zvimwe pazasi.
Kudzvanya bhatani rimwe chete parutivi kunomutsa iyo skrini uye kunokutora udzokere kuchiratidziro chemumba kana uri mumenyu kana app. Kuimanikidza paunenge uri pachiratidziro chemumba kunounza chinotora app nekuwana mukana wekurara info, SpO2 kuongorora, kufema maekisesaizi, nguva, maalarm, zvichingodaro. Kusvetuka uchibva kuruboshwe-kuruoko rwechidzitiro inoshanda sebhatani rako re "kumashure".
Kana iwe ukabatanidzwa pafoni yeHuawei, unogona kushandisa iyo Watch Fit senge iri kure shutter yekamera. Ndakafadzwa nekuteerera kwaiita izvi. Ini ndaitarisira kunonoka kwenguva refu pakati pekutsinya bhatani reWatch Fit uye foni ichitora pikicha, asi zvainge zvangoitika ipapo ipapo.
Kusvetuka uchikwira kubva kumucheto wezasi kunounza runyorwa rwako rwezviziviso, izvo iwe zvaunogona kugadzirisa mune yeHuawei Hutano app. Unogona kuona zviziviso zviviri panguva imwe; kubaya imwe kunovhura chiziviso chizere-skrini, kuratidza mitsara mitanhatu yemavara iwe yaunogona kupururudza kuburikidza kuti urambe uchiverenga. Izvi zvinoverengwa-chete, zvisinei, hapana mhinduro yekuita pano.
Kusvetuka pasi kubva pamusoro pechidzitiro chemba kunounza "mapfupi ekugadzirisa" mapfupi. Izvi zvinosanganisira marongero emenyu ekumisikidza, usakanganisa kuchinja, "show time" Togg, tsvaga foni yangu, uye nzira yekucheresa alarm. Iwe zvakare uchawana yako bhatiri chiratidzo pano, pamwe neBluetooth chinongedzo uye iyo zuva kana isati yatove yakaratidzwa pane yako wachi yekutarisa.
Read more: Iwo akanyanya akasimba mateki evakadzi
Iyo Zvirongwa menyu, inowanikwa nekutsvaira pasi kubva pamusoro pechiratidziro chemumba kana kuburikidza neanotora app, chinhu chakatsiga chakaonda. Unogona kushandura maratidziro senge nguva yekuvhara screen kana kusarudza chitsva chekutarisa kumeso, gadzirisa iyo haptics, seti usakanganisa maprofiles, uye kudzima otomatiki-kuona kushanda. Haptics yakasarudzika yakaiswa ku "yakasimba," iyo yandinofarira. Iyo "yakapfava" sarudzo yakanyanya kungoita pfupi ipfupi, kana iwe unogona kungoadzima zvachose.
Ini ndatoziva kwazvo neLite OS uye iyo dhizaini dhizaini uye kufamba, saka ini ndainakidzwa neruzivo pano. Zvakakosha kunongedzera kune chero munhu asina kujairana neLite OS kuti zvimwe zvikamu zve software zvinogona kuwedzerwa kana iwe ukapinda mazviri kuburikidza neanotora app.
Semuenzaniso, main screen screen inongoratidzira tembiricha yazvino uye mashoma ezuva nezuva uye huwandu. Kana iwe ukaenda mumamiriro ekunze kuburikidza neanotora app kunyangwe iwe uchikwanisa kusvetera kumusoro kune kweawa tembiricha shanduko uye fungidziro yemazuva ese yevhiki iri pamberi. Saizvozvowo, chiitiko chedashboard pane yako yekumusoro skrini inongoratidza yekufambira mberi mita, asi kana iwe ukaenda mune zvechiitiko zvinyorwa mune yeapp picker iwe uchaona iro rakafanana dashibhodhi asi zvakare unogona swipe kumusoro kuti uburitse rumwe ruzivo.
Chiitiko uye kugwinya kwekutevera
IHuawei Watch Fit inoteedzera zviitiko 96 zvakasiyana, zvinosanganisira auto-yekutevera yekufamba, kumhanya, elliptical, uye kukwasva. Iyo Watch Fit inogara ichikuyeuchidza iwe kusimuka uye kutambanudza kana wanga usingaite kwenguva yakareba - chinhu chandakazopedzisira ndakunda chishuwo chekuregeredza. Ichi chinongova chikonzero chimwe chete chakakosha kuchengetedza avo vanokanganisa.
Zvimwe (zvakaitwa nemaoko) zvemuviri zvekutevera zvemuviri zvinosanganisira zvemukati nekunze kumhanya uye kuchovha bhasikoro, kukwira makosi, kumhanya makosi, kushambira kwemukati uye kwemvura yakavhurika, uye zvimwe zvakawanda. (Ingo bata bhatani "+ Wedzera" pazasi pechinyorwa kuti uwedzere zvimwe zviitiko seyoga, HIIT, tsiva, simba rekudzidzisa, ballet, uye hunyanzvi hwekurwa kune yako yekukurumidza kuwana runyorwa.)
IHuawei Watch Fit yakavandudza GPS kuti inyatsoita yekutevera kwemitezo, zvinorevawo iwe haufanire kutora foni yako uende nayo nekumhanya. Zvinosuruvarisa, iwe hauzove nemukana wekuteerera mimhanzi yakachengetwa pawatch neBluetooth earbuds yakabatanidzwa pairi senge neHuawei's GT 2 nhevedzano yemawachi. Huawei anoti unogona kuwana maawa gumi nemaviri ehupenyu hwebhatiri kunze kweWatch Fit kana GPS iri kushandisa iyo nguva yese.
Kana iwe uchida kuwedzera kwekuwedzera kudzidzisa, kune gumi nemaviri ehupenyu hupenyu makosi ekukutungamira iwe kuburikidza neakareruka maekisesaizi. Ndakaedza akati wandei uye ini ndakakoshesa zvese pfungwa uye kuuraya. Handikwanise kufungidzira vanhu vazhinji vachizoshandisa zvese izvo kazhinji asi chero chinhu kubatsira vanhu kuti vawedzere kushanda chakakosha.
Kune zvekare karenda yekumwedzi yekutenderera iwe yaunogona kuwedzera kune yako Huawei Hwadhi redhibhodhi nekutepa Hora pazasi peiyo huru dashboard skrini.
Iko kuongorora kweSpO2 kuri-kudiwa chete. Ipo Huawei ichiti zviyero zveSpO2 "zvinoenderana nemidziyo yehunyanzvi," zvinyorwa zvavo zvinoti iyo Watch Fit hachisi chinhu chekurapa uye chinofanirwa kushandiswa kureva chete. Ichi chisungo chepamutemo maererano nezvechitupa asi zvakadaro, iyo SpO2 yekutevera pano yakanaka kwazvo isina kana 24/7 yekutevera kana yekurara kufema kwekuzivisa.
Ini ndaona kuteedzera kwaHuawei kwekusimba kuti kuve kwakanakisa pamatanho eWatch.
IWatch Fit haina mvura ku5ATM, zvichireva kuti unogona kuitora zvakachengeteka mudziva. Ndakave nerombo rakaipa munguva yakapfuura nehumwe smartwatches 'kugona kunyatso tarisa pamakumbo pakashambira, saka ndichave ndinofarira kuona kana iyo Watch Fit ichifamba zvirinani. Zvinosuruvarisa kuti ini ndanga ndisingaendi chero padhuze nepuruhombe yeruzhinji panguva yeHuawei Watch Fit nguva yekuongorora saka ndichafanirwa kubata mutongo ipapo.
Kazhinji, ini ndinoona kuti kuteedzera kwaHuawei kwakanaka. Izvi zvakafananawo pano paWatch Fit. Ini ndakatevera akati wandei emabhasikoro, kumwe kufamba (uko iyo Watch Fit yakanyatsoona auto), uye kumwe kudzidziswa kwesimba. NeWatch GT 2 Pro pane yangu imwe ruoko, iyo data inowirirana chaizvo. Iyo GPS nzira info uye imwe yakanyorwa data yaive chaiyo chaizvo futi.
Zvese zvataurwa, ndakafadzwa kwazvo neWatch Fit. Tichifunga nezvekuti zvakashata sei "chaiyo" smartwatch senge iyo Samsung Galaxy Anoshanda 2 dzimwe nguva dzinoteedzera zviitiko, ndakafara kuwana iwo iwo chaiwo mwero wekuvimbika weanodhura eHuawei mawatch pane yakadhura mitengo poindi. Kubva kuSpO2 kuongorora kusvika pamwoyo, kushushikana, kana kurara, iyo Watch Fit yakaita zvese zvakanakisa sebasa nekutevera muviri seWatch GT 2 Pro inodhura zvakapetwa katatu.
Kuwedzera kuverenga: Akanakisa matsva ekupfeka kubva kuUFA 2020
Chinhu chimwe chichava chibvumirano-chekupwanya kwevamwe kushayikwa kwechitatu-bato app rutsigiro. Kana iwe wakadzika midzi muStrava ecosystem, semuenzaniso, iyo Kurinda Fit haisi yako. Pane mamwe maWatchwei eHuawei andakashandisa, unogona kugoverana nedata neGoogle Fit, zvisinei, ini handina kukwanisa kuzviita kuti zvishande neWatch Fit. Mumwe muteveri weHuawei akandiudza kuti "haitsigire kugoverana kwedata mhiri kwemakungwa," zvichireva kuti zvinoreva kunze kweChina.
Iwo maFit Fit akakwirana kune yako Android foni kana iPhone kuburikidza neBT5.0 / Bluetooth LE uye ine 4GB yekuchengetedza. Sezvambotaurwa pamusoro apa, hauna mukana wekutakudza mimhanzi yako wega, uye haugone kubatanidza mahedhiyo mairi. Iko, hongu, hapana NFC paWatch Fit kana, kana mutauri wekutora mafoni.
Zvimwe zvekutanga zvinhu hazviwanikwe kana paired kune iyo iPhone (senge bvunzo yekushushikana, mimhanzi kudzora, kana iyo yekuenda kumwedzi kendendari), uye zvimwe zvakapfuura senge kure kure shutter zvinongoshanda kana zvakabatanidzwa kune yeHuawei mudziyo.
Iyo Watch Fit zvakasikwa haina kupa zvakaringana mashandiro seye anodhura Huawei smartwatch asi ichiri kufukidza zvakashata zvakawanda zvezvakakosha, uchifunga kuti une foni yeHuawei pakutanga kana iyo Android foni mune yechipiri.
Huawei Tarisa Kukodzera specs
Huawei Tarisa Fit
kuratidza 1.64-inch AMOLED inobata skrini
Resolution 456 × 280, 326 ppi
Kuchengetedza / CPU 4GB ROM, DK3.5 + ST
Battery chinzvimbo 180mAh (mazuva gumi est.)
Pogo pini charger
Sensors uye zvikamu Accelerometer
Yekushaya moyo sensor (PPG)
Ambient mwenje sensor
Kushorwa kwemvura 5 ATM
kugarisana Android 4.4+ uye iOS 9.0+
Kuyera uye kuyerwa 46mm X 30mm X 10.7mm
34g (21g isina tambo)
zvinhu Muviri: Polymer
Kukosha uye kukwikwidza
Mutengo weHuawei Watch Fit parizvino wakanyorwa pa € 129/£ 119 pane webhusaiti yeHuawei muEurope (iyo German site uye Spanish saiti varikupa chiyero chemafuta emahara kana iwe ukatenga pamberi paGumiguru 2, 2020. Huawei France zvakare ine iyo Huawei Watch Fit ye € 129 asi iwe unogona kusarudza pakati pevaviri mini maspika, maBluetooth mahedhifoni Lite, kana chiyero chemafuta emuviri senge ako akasungwa freebie. Izvo hazvitaridzike seshamwari dzedu kuUK dziri kuwana chero zvipo zvekutapisa dhiri). IHuawei Watch Fit inowanikwa mune ese mana mavara muUK uye mainland Europe. Iwe unogona zvakare tonhonga paAmazon.
Pamutengo uyu, iyo Huawei Yekutarisa Fit inofananidzwa kune yakawanda evamwe vateedzeri vekusimba uye smartwatches, kubva ku Fitbit Charge 4 uye Samsung Galaxy Fit 2 kune izvozvi zvakadzikiswa Huawei Tarisa GT 2e. Ini ndingawana zvakaoma kukurudzira kune anoshandisa iPhone nekuda kwekushomeka kwekushanda pane kunyange zvimwe zvakakosha zvinhu, asi kune vese Android vashandisi ini ndinofunga kuti kuba. Yangu hombe caveat ndeyekuve nechokwadi chekuti unoziva chinonzi Lite OS uye chinopa chekutanga usati wadonha mukutarisira yakazara-inopepereswa smartwatch chiitiko.
Yakarongedzwa smartwatch inopihwa kubva kuHuawei, iine iyo yekambani yekutanga-yakave rectangular kumeso.
Iine software yakachinjika uye mutengo unodhura, iyo Watch Fit inounza huwandu hwakawanda hwehutachiona hweHuawei kuvanhu vakawanda.
€ 129 kuAmazon
Kudza Tarisa GS Pro ongororo: Yakavakirwa kugara asi haikwanise kuenda kure
Yakanyanya kusimba tracker 2022: Ndeipi fitness tracker yaunofanira kutenga?
Yakanakisisa Garmin wachi 2020: Fenix, Forerunner uye Vivo yakaenzaniswa
Huawei P30 Lite ongororo: Runako rwakakoshwa pamutengo wakaderera